- မိမိနဲ့ သဘောချင်းတိုက်ဆိုင်မှု မရှိတဲ့သူက မိမိရဲ့အကြံဉာဏ်ကို ရမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီး အကူအညီလာတောင်းနေတဲ့ အချိန်မှာ တစ်ဖက်သား စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်အောင် အကြောင်ရိုက်လိုက်တဲ့စိတ်။
- လိုချပ်တပ်မက်တဲ့ တဏှာကြောင့် လူတွေ ဒုက္ခဖြစ်နေကြရတယ်ဆိုတာကို သိကြမှာပါ။ လိုချင်တပ်မက်တဲ့ စိတ်ဖြစ်လာရတဲ့ အကြောင်းက ခံစားမိလို့။ ခံစားတယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းက စိတ်ချင်းစိတ်ချင်း လာထိတဲ့ အထိအငြိကြောင့်။ စိတ်ကို လာထိတဲ့အကြောင်းက အာရုံခြောက်ပါးကြောင့်။ အာရုံခြောက်ပါး ဖြစ်လာရတဲ့အကြောင်းက ခန္ဓာကိုယ်ရှိလို့၊ ဒါပဲရှိတယ်။ အကြောင်းတွေရှိလို့သာ အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကျိုးဆိုတာ ဖြစ်လာတာပဲ။ ဒီဖော်မြူလာက ပြင်လို့မရတော့ဘူး။
- လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲမှာ ရှိခွင့်ရသွားတဲ့ စိတ်တစ်ခုလို ဖြစ်သွားပါပြီ။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ကို အကြောင်းပြပြီး ဘယ်အချိန်ထိ အလုပ်မလုပ်ဘဲ နေနေကြဦးမှာလဲ?
- ဘာ့ကြောင့်လုပ်တာလဲ? ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ? ဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေမှာ အဖြေမရှိတဲ့၊ ရည်ရွယ်ချက်မရှိတဲ့၊ ဦးတည်ရာမရှိတဲ့၊ လူတစ်ယောက် အနေနဲ့ အသက်ရှင် ရပ်တည်နေတယ်ဆိုရင် လူတော့လူပဲ၊ ဒါပေမယ့် အဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့စိတ်နဲ့လူ၊ အကြောင်းအကျိုးမရှိတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အသက်ရှင်နေတဲ့စိတ်။
- မိမိ ယုံကြည်ရိုသေလေးစားနေတဲ့ သူတစ်ယောက်က လူမှုရေးဖောက်ပြန်နေတာတွေ မြင်ရ၊ ကြားရတဲ့အခါမှာ ရိုသေခဲ့တဲ့ စိတ်တွေ ချက်ချင်း ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ စိတ်ပုံစံ။
- လူသုံးလေးယောက် လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကို တစ်ယောက်တည်း အပင်ပန်းခံပြီး လုပ်နိုင်နေတာဟာ အကြမ်းခံနိုင်တဲ့ အလုပ်သမားရဲ့ စိတ်အမျိုးအစားပဲ။
- ဖြစ်ချင်မှု ဆန္ဒပြင်းထန် တက်ကြွမှုနဲ့အတူ အဖန်တလဲလဲ အားထုတ်နေမှသာ ဖြစ်ချင်တာ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှု စိတ်အနေအထား။
- လူလိမ်၊ လူညာ၊ လူလည်တွေဟာ ပစ်မှတ်ထားထားတဲ့ သားကောင်ရဲ့ပုံစံအပေါ်မှာ မူတည်ပြီး အခြေအနေအရ အလိမ်အညာ အကွေ့အကောက် နည်းမျိုးစုံကို ပြောင်းလဲအသုံးချနေတဲ့စိတ်။
အကွက်ကောင်းစောင့်နေသောစိတ်၊ အကွက်ချတတ်သောစိတ်၊ အကွက်ချောင်းနေသောစိတ်၊ အကွက်စေ့အောင် လှုပ်ရှား တတ်သောစိတ်၊ အကွက်ဆင်တတ်သောစိတ်
- အကွက်ကောင်းကို စောင့်နေတဲ့သူဟာ အကွက်ဆင်ထားတဲ့ထဲ ၀င်လာပြီဆိုရင်တော့ အကွက်စေ့အောင် အချိန်များစွာပေးပြီး ဇယားချ အကွက်ချောင်းနေရတဲ့ ရင်းနှီးပင်ပန်းမှုနဲ့ တန်အောင်၊ ကာမိအောင်၊ ပြင်ဆင်ထားတဲ့အတိုင်း အကွက်ချ လှုပ်ရှားတော့မှာ သေချာတယ်။ ကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲ လုပ်လုပ်၊ မကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်လုပ် အောင်မြင်မှာပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလောက် တော်တဲ့ဦးနှောက်ရှင်ကို မေတ္တာရပ်ခံချင်တာကတော့ လူတွေကို အကျိုးပြုတဲ့ဘက်မှာ အာရုံရွှေ့ပေးပါလား!